မြန်မာပြည်မှာ အမျိုးအမည်မသိ ထူးဆန်းတဲ့ ယာဉ်ပျံတွေ တွေ့ခဲ့ရကြောင်း ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ ပညာရှင်တဦး – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတများ > မြန်မာပြည်မှာ အမျိုးအမည်မသိ ထူးဆန်းတဲ့ ယာဉ်ပျံတွေ တွေ့ခဲ့ရကြောင်း ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ ပညာရှင်တဦး
ဒီနေ့ တော်လှန်ရေးနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ မယုံနိုင်စရာ ထူးထူးခြားခြား Post တစ်ခု တင်ပါရစေ.. ကျွန်တော် နည်းပညာသမားတစ်ယောက်ပါ.. ဒါလေး အရင် စကားခံပါရစေ.. ကျွန်တော်ကို Advanced Technology တွေ Research လုပ်နေတဲ့ နည်းပညာရှင် မှန်း အများစု သိလိမ့်မယ်ဆိုတာ ထည့်ပြောတာပါ.. Neuroscience , Quantum , Artificial Intelligence ဒါနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ နယ်ပယ်က လူအများစု ကျွန်တော် ကို သိမယ်ထင်ပါတယ်..
တစ်ကမ္ဘာလုံးက Johnny Depp နဲ့ Amber Heard ကိစ္စ ပွက်ပွက်ညံနေတုန်းမှာ အမေရိကန် ကွန်ဂရက်ကနေ US Navy ကို UFO ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရှင်းလင်းဖို့ ဆင့်ခေါ်ပါတယ်.. အတော်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ.. နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် လွှတ်တော်မှာ Public Hearing လုပ်ပါတယ်။
UFO ဆိုတာ “Unidentified Flying Object” – အမျိုးအမည်မသိ ပျံသန်းနေတဲ့အရာဝတ္ထု လို့ ဘာသာပြန်ရပါ့မယ်.. လွှတ်တော်ကို လာရှင်းတဲ့အချိန်မှာ UFO ဆိုတဲ့နာမည်အစား UAP ( Unidentified Aerial Phenomena) အမျိုးအမည်မသိ လေပေါ်ပျံ သဘာ၀လွန်အရာ လို့ ခေါ်ရမယ်ထင်တယ်.. အဲလို ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။
US Gov က ဒီကိစ္စကို သိုသိုဝှက်ဝှက်လုပ်ရာကနေ လူထုရှေ့ကို လာရှင်းတဲ့အခါ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး အကြောင်းပြပြီး အကုန်လုံးကို ထုတ်မပြောနိုင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်.. အဲ့ဒီ UAP ခေါ် သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဘာမှန်းမသိတဲ့ အရာ၀တ္တုတွေ ၃ ခု နီးပါးကို ထုတ်ပြပါတယ်။
ဒီဟာတွေက ပြင်ပ ကမ္ဘာကလား ဒါမှမဟုတ် US မဟုတ်ပဲ အခြားနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ China , Russia ကလားဆိုတာ သေချာမရှင်းသလို လူသားတွေရဲ့ နည်းပညာဖြစ်တဲ့ လေယာဉ်တွေ ရဟတ်ယာဉ်တွေလို ပန်ကာမပါ ၊ အသံမမြည်၊ မီးခိုးမထွက် ပဲ Aerodynamics နဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး ပျံသန်းနေတာတွေကို မျက်မြင်တွေရပါတယ်လို့ ထုတ်ပြောပါတယ်။ ထုတ်ပြတဲ့ မှတ်တမ်းတွေအပြင် သူတို့ တွေ့ရှိတာ အကြိမ် ၄၀၀ မက ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
UFO တွေ အမှန်တကယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာ ထုတ်ပြောပါမယ်.. ဒီစကားကို အာမခံတယ်.. လူတွေ မယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ ကိစ္စကို အာမခံ ပေးနိုင်တဲ့ ၊ သက်သေခံ ပေးနိုင်တဲ့ နည်းပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့ ပြောတာပါ။ ကျွန်တော် အကြိမ် ဆယ်ဂဏန်း နီးပါး မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးတယ်။ ဘယ်နားမှာ ဘယ်လိုမြင်တယ်၊ ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ အချိန်ကာလနဲ့ နေရာတွေ တစ်ချက် ချန်ထားပါရစေ။
တွေ့မြင်တဲ့နေ့ရက်၊ အချိန်တွေကို မှတ်တမ်းမှတ်ရာ လုပ်ထားပါတယ်။ အရမ်း လင်းလက်တောက်ပနေတဲ့ ၆ထပ်တိုက်အရွယ်ရှိမဲ့ အလင်းလုံးကြီးတွေ ပျံသွားတာ၊ အုပ်စုလိုက်ပျံနေတဲ့ ယာဉ်ပျံငယ်တွေနဲ့ ယာဉ်ပျံကြီးတွေကို မြင်ဖူးတယ်၊ ရပ်နေတဲ့ ယာဉ်ပျံကြီးနားမှာ ယာဉ်ပျံငယ်တွေ ပျံနေတာ၊ အလွန့်အလွန် မြန်တဲ့နှုန်း ပျံသွားတဲ့ ယာဉ်ပျံတွေ ၊ Portal ထဲ ၀င်သွားတာ ဒါတွေ မြင်ဖူးတယ်။
လေယာဉ်ပျံ၊ ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ မှားစရာမရှိတဲ့အချက်က ဒီယာဥ်ပျံတွေက physics ကို ဆန့်ကျင်ပြီး ပျံတာကို တွေ့ဖူးပါတယ်။ UFO ဟာ ပန်းကန်ပြားပျံလို မဆိုလိုပါဘူး ပန်းကန်ပြားပျံလို ပုံစံမျိုး တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးပါဘူး။ ရုပ်ရှင်တွေထဲက ယာဉ်ပျံတွေနဲ့လည်း မတူပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ တွေ့တာပါ။
လူနေထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာ တွေ့ဖူးပါတယ်။ လူတွေ မမြင် မတွေ့ကြတာ တွေ့တဲ့အချိန် အကြိမ်တိုင်းမှာ ကျွန်တော်အနားမှာ တခြားသူတွေပါ ရှိပါတယ်။ အခုထိ သူတို့ သက်ရှင်ထင်ရှား ရှိနေပါသေးတယ်။ ယာဉ်ပျံကြီးတစ်စီးကို ပထမဆုံး တွေ့တုန်းဆို အနားမှာ လူရာချီ ရှိပါတယ်။ အရင့် စစ်တပ်က အရာရှိတွေတောင် ပါပါတယ်.. အဲ့ဒီအချိန်က စစ်အစိုးရလက်ထက်ပါ.. သူတို့လည်း အဲဒါကို သိနေမယ်..မှတ်တမ်းမှတ်ရာတချို့ ရှိနေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်.. လေကြောင်း တားမြစ် ဧရိယာပေါ်က ထင်ထင်ရှားရှား အမြင့်ကနေ ဖြတ်သွားတဲ့ တစ်ကြိမ်ကို ကြုံထားဖူးလို့ပါ။
ဒီယာဉ်ပျံတွေက ဂြိုလ်သားယာဉ်ပျံတွေလို့ မဆိုလိုပါဘူး ..တခြားကမ္ဘာကလည်း ဖြစ်နိုင်သလို ဒီကမ္ဘာကလူတွေ ပဲ ထွင်ထားတဲ့ နည်းပညာလွန် ယာဉ်ပျံတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်.. ဂြိုလ်သားဆိုတာကို မမြင်ဖူးပါဘူး.. သဘာ၀ မဟုတ်တဲ့ ယာဉ်ပျံတွေကိုပဲ မြင်ဖူးတာပါ..
သေချာတာက အတော်ကို နည်းပညာအဆင့်အတန်း မြင့်တဲ့ ယာဉ်ပျံတွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိနေတာ သေချာပါပြီ.. မြန်မာပြည်က မြို့ပေါ် လူတွေက တစ်ခါတစ်လေ ကောင်းကင် ကို မော့ကြည့်ဖို့ မေ့နေတယ်ဆိုတာ ထည့်ပြောပါရစေ။
ဒီစာကိုရေးလို့ လူတွေကို ယုံဖို့မပြောပါဘူး.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် နာမည်ရှိ ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိတဲ့ နည်းပညာရှင် တစ်ယောက်အေနနဲ့ ဒါတွေ တကယ်ရှိကြောင်း အာမခံပေးရုံပါပဲ Professional Technician တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်မျက်စိနဲ့တပ်အပ်မြင်ပြီးသား ၊ တခြားလွှဲမှား နိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး အတည်ပြုပြီးသားပါ. မဟုတ်တဲ့အရာကို ဟုတ်ပါတယ်လို့ ကျွန်တော် Professional Reputation အထိခံပြီး ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒါက တကယ့် ရှိနေတဲ့အမှန်တရားပါ.. လူသမိုင်းတစ်လျှောက် မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ ငြင်းခုန်နေတဲ့ ကိစ္စကြီးတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင် မျက်မြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်က ရှော့ရသွားတယ်.. ထုတ်ပြောရင် လူတွေမယုံနိုင်လောက်ဘူး ၊ လက်ခံနိုင်ဖို့ ခဲယဥ်းတယ် ၊ လူ အရိုသေမဲ့နိုင်တာကြောင့် ထုတ်မပြောမိဖို့ နှစ်ပေါင်း ဆယ်ချီ ထိန်းထားခဲ့ရတယ်.. US Public Hearing သာမလုပ်ဘူး US Gov ကလည်း UFO or UAP တွေ ရှိကြောင်း ၀န်မခံရင် ကျွန်တော်လည်း ထုတ်ပြောဖို့ မရှိပါဘူး..
(တလရပြီးသွားတဲ့တစ်ချိန် ဒီကိစ္စကို အစိုးရအနေနဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးစေချင်ရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တရားရုံးမှာ ကျမ်းကျိန်ပြီး ထွက်ဆိုပါမယ် ) နိုင်ငံအရေးကိုပဲ အာရုံစိုက်ကြပါ.. စိတ်ဝင်စားမှုမလွန်ပါနဲ့ .. အချိန်တန်ရင် သိစရာရှိတာ သိ၊ ဖြစ်စရာရှိတာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
(ဒီ Post က တလရတစ်လျှောက် UFO အကြောင်း ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးပါပဲ.. ထပ်မရေးတော့ပါ.. လာမေးရင်လည်း ပြောဖို့ ၊ ဆွေးနွေးဖို့ အချိန်မရှိပါဘူး) (Min Khant Aung)
Previous Article ကျိုက်ဒေးဝိ ဆံတော်ရှင် ရဲ့ ထူးခြားတဲ့နတ်ကျားအစောင့် နဲ့ ဘုရားလေးဆူမီခဲ့သောပတ္တမြား
Next Article ထမင်း စားလို့ရပြီ… အဖွားမှာ သွားတွေ အကုန်ရှိသွားပြီ….